Ubunzima kunye neSteenbeck: Itekhnoloji entsha yeinaliti ezinamandla
Yenza ibrashi yebrashi
I-Harder ne-Steenbeck kutshanje batyale imali kakhulu kumaziko abo emveliso eNorderstedt, eJamani. Oomatshini abathathu abaphezulu bezobuchwepheshe be-CNC kulo nyaka khange bonyuse kakhulu amandla abo okuvelisa, kodwa bavule neendlela ezintsha zoyilo lwemveliso, kunye nophuhliso.
Umatshini omtsha wokugaya i-CNC kunye nomatshini wokujika uhambelana noomatshini esele benziwe apho i-Harder & Steenbeck airbrushes yenziwe, ngelixa umatshini omtsha wokucoca wenza ukuba ukugqitywa kogqibeleleyo kufakwe kula malungu emva kokuba kwenziwe umshini.
Kodwa iyunithi enika owona mdla mkhulu kubasebenzisi beHarder & Steenbeck ngumatshini omtsha wenaliti we-CNC. Izakhono zalo matshini zithetha ukuba i-H & S inokuzisa izimvo ezintsha ekubunjweni nasekugqityweni kwenaliti. Kwaye ke ngale nkululeko intsha, baqala ukwenza uphando ngeendlela zokuba ngcono!
Injongo yokuqala, yayiyeyona nto ifunwa ngumntu wonke ngenaliti - ukuba namandla! Isixhobo esitsha sinokusebenza kunye nokubumba izixhobo ezingaqhelekanga, kwaye ke iinaliti ezintsha zenziwe ngezinto ezingaphantse zibe li-1/3 ubunzima kunangaphambili.
Kwaye emva koko uyilo… Uninzi lwenziwe kutshanje ngenaliti “zokuphinda-kabini”. Kuyinyani ukuba iinaliti ezimbini zepatroti zingaphezulu kwiinaliti enye. Nangona kunjalo, ukuba ngumphindi kabini akusosiqinisekiso sokuphumelela. I-H & S yafunda ukuba eyona ndawo apho upende “oqhawukayo” ngenaliti yeyona ndawo ibalulekileyo. Ngomsebenzi wolwazi, kulapho la maqela mabini ahlanganela khona.
I-H & S iqhube isifundo ngo-2018 ubude be taper, ii-angles kunye notshintsho kwindlela yoyilo yenaliti phakathi kweetapile zombini. Emva kweeprototypes ezininzi, kunye nexesha elininzi elichithwa ekusebenzeni nabachwephesha, indlela entsha ephuculweyo yenzelwe bonke ubungakanani ukusuka kwi-0.15mm ukuya kwi-0.6mm.
I-H&S yathatha ithuba lokwenza uphawu lokuphawula inaliti ngasemva ukuze kube lula ukuyiqonda, njengoko ubona kwimifanekiso. I-nozzles ngoku nazo ziphethe indlela enye elula.
Ingxelo yenaliti entsha yiyo yonke into eyayijolise kuyo i-H & S kulawulo ngakumbi kwiinkcukacha, imigca ecocekileyo kunye ne-atomisation engcono kudidi lwee-trigger. Zona azithambekeleli ekubeni zome kwaye ngenxa yento enzima kunye noyilo oluhlaziyiweyo, zomelele ngakumbi kuneenguqulelo zangaphambili.
Akukho zithuba zinxulumene.
Ixesha lokuposa: ngo-Disemba-24 ukuya kowama-2019